Safal Khabar - अलपत्र महिला अस्पतालमा
अलपत्र महिला अस्पतालमा
शुक्रबार, ०६ मङि्सर २०७६, २० : ४१
काठमाडौं । सुकेको जीउभरि चुरोटले पोलेको दाग, तातो पानीले डामेको खाटा, संवेदनशील अङ्गमा घाउका डोब देखिन्छन् । कलेजोले काम गर्न छाडिसकेको छ । बेलाबेलामा पेटमा पानी जमेर निकाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
दयनीय अवस्थामा सडकबाट उद्धार गरिनुभएकी एक महिला अहिले काठमाडौँको वीर अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ । शुरुमा एक महिलाले खाना पकाउने काममा लगाइदिने भनेर उहाँलाई काठमाडौँ ल्याएकी थिइन् । काठमाडौँको होटलले भने खाना पकाउने कामको सट्टामा आफूलाई देह व्यापारमा लगाएको पीडित महिला बताउनुहुन्छ ।
होटलमा मदिरामा पाउडर मिसाएर खुवाउने अनि ग्राहकसँग बस्न लगाउने गरेको उहाँको आरोप छ । नमान्दा भने तातोपानी खन्याएर यातना दिने गरेको पीडा उहाँले सुनाउनुभयो । अस्पतालमै पुगेर उहाँको अवस्था बुझ्नुभएका पूर्वमन्त्री कमला पन्तले इच्छा विपरीतका काममा लगाएर विक्षिप्त बनाएपछि उहाँलाई सडकमा छाडिएकोे जिकिर गर्नुभयो । “मान्छे हेर्नासाथै मन विरक्तिएर आउँछ, धन्न कसरी बाँचिन्झैँ लाग्छ”, पन्तले रासससँग भन्नुभयो ।
पीडितका अनुसार सानै उमेरमा सिन्धुपाल्चोकको एक गाउँमा उहाँको विवाह भएको थियो । दुई बच्चा गाउँमा आफन्तसँग छन् । श्रीमान्को निधनपछि सहारा दिने मान्छे नभएर उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो ।महानगरीय प्रहरी परिसरका अनुसार केही वर्षअघि एक महिलाले काठमाडौँ ल्याएर उनलाई छाडेकी थिइन् । परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले देह व्यापारमा लाग्न महिलालाई कसैले बाध्य पारेको हो कि भनेर अनुसन्धान थालिएको बताउनुभयो ।
महिलाको बयानका आधारमा सोधपुछका लागि प्रहरीले केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । महिला विगतदेखि नै सडकमा देखेको स्थानीयवासीले बताएकाले खास कारण के हो भनेर अझै अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । यदि सडकमै बस्ने भए पनि उनी सडकमा आउनुपर्नाको कारण के हो भन्नेतर्फ प्रहरीको ध्यान जानुपर्ने महिला अधिकारकर्मीको भनाइ छ । “ज्यानभरि चुरोटैचुरोटले पोलेको छ, विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छौँ, अवस्था नाजुक भए पनि सुधारोन्मुख छ”, परिसरका प्रहरी नायब उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले भन्नुभयो ।
घर सिन्धुपाल्चोक र माइती बागलुङ बताउने महिलाको प्रजनन अङ्गमा समेत समस्या हुनसक्ने आशङ्कामा परीक्षण भइरहेको छ । उहाँको कलेजो बिग्रिसकेकाले प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको चिकित्सकले बताएका छन् ।सडकमा पेट फुलेको अवस्थामा महिला रहेको माछापोखरीबाट एक व्यक्तिले मानवसेवा आश्रममा खबर गरेपछि उनलाई अस्पताल पु¥याइएको थियो । अस्पतालले पेटमा पानी जमेर ठूलो भएको तर कलेजोले काम नगरेको प्रतिवेदनदियो । बेसहारा रहेकाले अहिले उहाँको रेखदेख आफूहरुले नै गरिरहेको आश्रमका प्रदेश संयोजक सुमन बर्ताैलाले जानकारी दिनुभयो । बर्ताैलाका अनुसार हाल २२ वर्षीया उहाँको १३ वर्षमा बिहे भई १५ वर्षमा नै उहाँले शिशु जन्माउनुभएको थियो । झण्डै दुई वर्षदेखि उहाँ यसरी काठमाडौँमा बस्न बाध्य भएको जनाइएको छ ।
काठमाडौंको वीर अस्पतालमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको आशंका गरिएका एक युवतीको मृत्यु भएको छ ।
वीरको ‘भीभीआईपी’ कक्ष सधैं रित्तै
वीर अस्पतालको पहिलो तलाको उत्तरपूर्वमा अति अतिविशिष्ट...
१. रकम असुलेको आरोपमा पक्राउ
२. रद्द भयो सहसचिवको नतिजा
३. इन्स्टाग्रामको कमजोरी पत्ता लगाउँदा यी नेपालीले पाए ६ हजार डलर पुरस्कार
४. अब आधा घण्टामै कोरोनाको रिपोर्ट
५. आयुर्वेदिक अस्पतालमा कोरोनाको उपचार, ७ दिनमै निको भए सङ्क्रमित
६. सर्पको डसाइबाट मृत्यु
७. भदौ १ गतेदेखि उद्धार उडान हुने
८. अमेरिका र चीनबीच महामारीबीच व्यापार सम्झौताबारे छलफल
९. २५ बैंकको विवरण सार्वजनिक : नाफा घट्यो